Ho an'ny LIMITED TIME ONLY, azonao atao ny mamonjy $ 39.99 ary aloanao ny kopia FREE OFISIALO ny boky mivelatra indrindra nataon'i Mike Geary, Fat Burning Kitchen! Tsy maintsy mandoa vola kely fotsiny ianao amin'ny fandefasana sy fikarakarana.
* Ny tolotra dia manan-kery raha ny famatsiana farany. Tsy misy na inona na inona dia ho feno fanoloran-tena miaraka amin'ity tolotra ity, na dia tsy maintsy mandoa ny fotoana fandefasana kely sy ny fandoavana saram-pandraharahana aza ianao. Izany no fomba nataon'i Mike Geary hampiroborobo ny fomba fiainany mahasalama sy fomba iray hanehoana fankasitrahana noho ny nanolorany ny bokiny ho mpivarotra tsara indrindra.
Free eBook: Fampiofanana sy sakafo amin'ny tsiambaratelo hidirana amin'ny vatana